ထီအကြိမ် ၃၀၀ကျော် ပေါက်စေခဲ့တဲ့ အဓဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်နည်း * Manaw Maya
အိမ့်ချစ်ကို တောင်းပန်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
အောက်လမ်းနဲ့ အစိမ်းတိုက် ခံခဲ့ရတဲ့ ဝေဠုကျော်
ရွှေစကား ငွေစကား ဟောစာတမ်း
ခိုင်နှင်းဝေဂေဟာကို နို့မှုန့် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အောင်သူတို့မိသားစု
Dollor (3000) ဆုမဲကြီး စပ်တူပေါက်သွားတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်နဲ့ ပိုပို
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဂဏန်း ဗေဒင်
အရမ်းကိုလန်းတဲ့ ဆက်ဆီမွေးနေ့ကိတ်လေး လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
For read everyday , Like & follow on facebook
ထီအကြိမ် ၃၀၀ကျော် ပေါက်စေခဲ့တဲ့ အဓဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်နည်း
admin | August 13, 2019 |0| Knowledge , ဘာသာရေး , သုတစာပေ
ထီပေါက်ချင်သူများအတွက် ဓမ္မမိတ်ဆွေ တစ်ဦးကိုယ်တွေ့ ထီအကြိမ် ၃၀၀ကျော် ပေါက်စေသော ပုတီးစိပ်နည်းလေးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
ယက္ကန်းစင်တောင်ဆရာတော် ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်တဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီး UphyoMyint ကို ယက္ကန်းစင်တောင် ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ ပုတီးစိပ်နည်းပါ..အများမြင်တွေ့နေကြ ဆရာတော်ပုတီးစိပ်နည်းထက် သုံးကြောင်းပိုပါတယ်။
ဦးဖြိုးမြင့် ဂါထာ ပေါင်းစုံကို တနေ့ နှစ်နာရီကျော် ပုတီးစိပ်တာ ဈေးရောင်းမကောင်းဘဲ ယက္ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်က ဒီဂါထာ ပေးလို့ ရွတ်တာနဲ့ သိသိသာသာဈေးရောင်းကောင်းပြီး အစစအရာရာအဆင်ပြေလာပါတယ်။
ဂါထာတန်ခိုးနဲ့ ထီတွေ ဆုကြီးဆုငယ် အကြိမ် ၃၀၀ကျော်ပေါက်ပါတယ် ဂါထာ အစအဆုံးရွတ်ပြီး ပုတီးတစ်လုံးချ တနေ့ တပတ်စိပ်ရမှာပါ မစိပ်နိုင်ရင် မနက် ၉နာရီ ည၉နာရီ အချိန်တွေမှာ အနည်းဆုံး ၉ခေါက်ရွတ်ပါ။
ဘေးရန်ကင်းကွာ လာဘ်ရွှင်ကာ အစစအရာရာအောင်မြင်ပြီးပေါက် သိဒ္ဓိ ပေါက်စေနိုင်ပါတယ် ယက္ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဦးသြဘာသ၏လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုးကိုဖြစ်စေသောပုတီးစိပ် ဂါထာ။
သိဒ္ဓိဘဂဝါအရဟံ ဗုဒ္ဓေါမေ သတ္တပါကာရံ ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ။
သိဒ္ဓိဘဂဝါအရဟံ ဓမ္မောမေ သတ္တပါကာရံ ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိ။
သိဒ္ဓိဘဂဝါအရဟံ သံဃောမေ သတ္တပါကာရံ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ။
ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မသရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ
တစ်ရက်လျင်ပုတီးကိုးပါတ် ကိုးရက် အဓိဋ္ဌာမ်ဝင်၍ အချိန်မှန်မှန် စိတ်ပေပါက အကျိုးပေးသန်၍ အကျိုးပေး ပိုမိုမြန်ဆန် စေပါသည်။
ထီအကွိမျ ၃၀၀ကြျော ပေါကျစခေဲ့တဲ့ ပုတီးစိပျနညျး
ထီပေါကျခငျြသူမြားအတှကျ ဓမ်မမိတျဆှေ တဈဦးကိုယျတှေ့ ထီအကွိမျ ၃၀၀ကြျော ပေါကျစသေော ပုတီးစိပျနညျးလေးကို ဝမြှေလိုကျပါတယျ ။
ယက်ကနျးစငျတောငျဆရာတျော ပဋ်ဌာနျးဆကျဖွဈတဲ့ ဓမ်မမိတျဆှကွေီး UphyoMyint ကို ယက်ကနျးစငျတောငျ ဆရာတျောကွီး ကိုယျတိုငျပေးထားတဲ့ ပုတီးစိပျနညျးပါ..အမြားမွငျတှနေ့ကွေ ဆရာတျောပုတီးစိပျနညျးထကျ သုံးကွောငျးပိုပါတယျ။
ဦးဖွိုးမွငျ့ ဂါထာ ပေါငျးစုံကို တနေ့ နှဈနာရီကြျော ပုတီးစိပျတာ ဈေးရောငျးမကောငျးဘဲ ယက်ကနျးစငျတောငျဆရာတျောက ဒီဂါထာ ပေးလို့ ရှတျတာနဲ့ သိသိသာသာဈေးရောငျးကောငျးပွီး အစစအရာရာအဆငျပွလောပါတယျ။
ဂါထာတနျခိုးနဲ့ ထီတှေ ဆုကွီးဆုငယျ အကွိမျ ၃၀၀ကြျောပေါကျပါတယျ ဂါထာ အစအဆုံးရှတျပွီး ပုတီးတဈလုံးခြ တနေ့ တပတျစိပျရမှာပါ မစိပျနိုငျရငျ မနကျ ၉နာရီ ည၉နာရီ အခြိနျတှမှော အနညျးဆုံး ၉ခေါကျရှတျပါ။
ဘေးရနျကငျးကှာ လာဘျရှငျကာ အစစအရာရာအောငျမွငျပွီးပေါကျ သိဒ်ဓိ ပေါကျစနေိုငျပါတယျ ယက်ကနျးစငျတောငျဆရာတျောဦးသွဘာသ၏လောကီလောကုတျနှဈဖွာသောအကြိုးကိုဖွဈစသေောပုတီးစိပျ ဂါထာ
သိဒ်ဓိဘဂဝါအရဟံ ဗုဒ်ဓေါမေ သတ်တပါကာရံ ဗုဒ်ဓံသရဏံဂစ်ဆာမိ။
သိဒ်ဓိဘဂဝါအရဟံ ဓမ်မောမေ သတ်တပါကာရံ ဓမ်မံသရဏံဂစ်ဆာမိ။
သိဒ်ဓိဘဂဝါအရဟံ သံဃောမေ သတ်တပါကာရံ သံဃံသရဏံဂစ်ဆာမိ။
ဗုဒ်ဓံသရဏံဂစ်ဆာမိ ဓမ်မသရဏံဂစ်ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ်ဆာမိ
တဈရကျလငျြပုတီးကိုးပါတျ ကိုးရကျ အဓိဋ်ဌာမျဝငျ၍ အခြိနျမှနျမှနျ စိတျပပေါက အကြိုးပေးသနျ၍ အကြိုးပေး ပိုမိုမွနျဆနျ စပေါသညျ။
admin | November 20, 2019 | 0
Zawgyi သူများထံမှ ယူထားတဲ့ ငွေ ပြန်ဆပ်ချင်သူတွေ အတွက်ပါ တချို့ မပြေလည်လို့. သူများဆီက ကြွေးယူ မပြေလည်တော့ပြန်မဆပ်နိူင် ရှာကြဘူး။ ဒီလို ပြန်ဆပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာက် ရှိတာကိုက. အင်မတန် လေးစားစရာ ကောင်းတယ် သူများဆီက. ငွေယူပြီ ပြန်ဆပိချင်တဲ့ စိတ်ဓာက် ရှိသူတွေလည် ရှိတယ် ။ သူတို့ခမျာ မပြေလည်လွန်းလို့သာ ငြိမ်နေရှာ ကြတာ ငွေ…
စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ပဋ္ဌာန်တရားတော်ကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဖြစ် ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ အင်္ဂလန်
admin | November 9, 2019 | 0
Zawgyi အချိန်တော်တော်များများမှာ ကလေးတွေဟာ ကန်ကျောက်တာနဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေကို ပြုမှုချိန်မှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် သူတို့တွေ ဘာတွေ ခံစားနေသလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ကြလို့ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကို ရှာမတွေ့လို့ပါပဲ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အင်္ဂလန်က စာသင်ကျောင်းတွေဟာ နည်းလမ်းသစ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီး စတင်လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ လူငယ်လူရွယ် ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ စာသင်ခန်းတွေမှာ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကို…
Copyright ©2019 Manaw Maya	. All rights reserved. Powered by WordPress & Designed by Cyclone Themes